Streptase (စထရက်တေ့စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Streptase (စထရက်တေ့စ်)
Streptase (စထရက်တေ့စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Streptase (စထရက်တေ့စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Streptase (စထရက်တေ့စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Streptase® ကို သွေးကြောထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော သွေးခဲများ ပြိုကွဲစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါ လက္ခဏာများ ပေါ်ပြီးနောက် လူနာ၏ အသက်ရှင်မှု တိုးမြင့်စေရန် ချက်ချင်း အသုံးပြုရသည်။ ဤ ဆေးကို အဆုတ် နှင့် ခြေထောက် တွင် သွေးခဲပိတ်ခြင်းကို ကုသရန် သုံးသည်။
ထို့အပြင် streptokinase ကို သွေးကြောတွင်း ထိုး သွင်းထားသော ပြွန်တွင် သွေးခဲများ ဖြိုခွဲရာတွင် သုံးသည်။ Streptase® ကို အခြားနေရာများတွင်လည်း သုံးနိုင်သည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Streptase (စထရက်တေ့စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Streptase® ကို သွေးကြောများထဲသို့ အပ် သို့မဟုတ် ပြွန်ဖြင့် သွင်းလေ့ရှိသည်။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အခြား လေ့ကျင့်ထားသော ကျန်းမာရေး ပညာရှင်မှ လုပ်ဆောင်လေ့ ရှိသည်။
Streptase (စထရက်တေ့စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Streptase® ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိုလှောင်ခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆေးမပျက်စီးစေရန် ဆေးကို ခဲအောင် မလုပ်ပါနှင့်။ Streptase® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။
သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဘေးကင်းစေရန် ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Streptase® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Streptase (စထရက်တေ့စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါး ပညာရှင် နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပါက သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက် နေပါက။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ကလေးရှိပါက ဆရာဝန်ထောက်ခံသော ဆေးများ ကိုသာ သောက် သင့်သည်။
သင်သည် အခြားဆေးများ သောက်နေပါက။ ဆေးဖက်ဝင်နှင့် တွဲဖက်ဆေးများ စသော ညွှန်ကြား ချက်မရှိဘဲ ဝယ်နိုင်သော ဆေးများအားလုံး ပါဝင် သည်။
Streptase® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
အခြား ဖျားနာခြင်း၊ ရောဂါ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ရှိပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Streptase (စထရက်တေ့စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Streptase® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Streptase® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Streptase® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိပါက သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေရပါက Streptase® မသုံးမီ ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Streptase (စထရက်တေ့စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Streptase® သည် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သွေးခဲပိတ်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းကြောင့် ကျောက် ကပ် ပျက်စီးခြင်း
ဦးခေါင်း၊ ခြေ၊လက်၊ အဆုတ်တွင် သွေးခဲ ပိတ်ခြင်း
အသည်း အင်ဇိုင်း ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
သေစေနိုင်သော၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်မှု
ဘယ်ဆေးတွေက Streptase (စထရက်တေ့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Streptase® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
Streptase® သည် သွေးကျဲဆေးနှင့် သွေးမခဲဆေး များနှင့် ပေါင်းပြီး သွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Streptase (စထရက်တေ့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Streptase® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Streptase (စထရက်တေ့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Streptase® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။
သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
ခန္ဓါကိုယ်၏ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သွေးထွက် ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးထွက်ဖူးခြင်း
ဦးနှောက် ရောဂါ သို့မဟုတ် အကျိတ်
သွေးပေါင်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးပေါင်ကျခြင်း
လေဖြတ်ခြင်း ( ၂ လအတွင်း)
ဤ အခြေအနေများတွင် Streptase® သုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ၂လအတွင်း ဦးနှောက်နှင့် ကျောရိုးကို ခွဲစိတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်း
ဆီးချိုသွေးချို နှင့် ဆီးချိုသွေးချိုကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိပြဿနာများ
နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်သို့ ပြွန်များ ထည့်ခြင်း
မကြာသေးမီက Streptococcal ပိုးဝင်ဖူးခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Streptase (စထရက်တေ့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၁.၅ သန်းယူနစ်ကို တစ်နာရီကျော်ကြာ ဆက်တိုက် ထိုးသွင်းပါ။ လက္ခဏာများပေါ်ပြီးနောက် ချက်ချင်း ဆောင် ရွက်ပါ။
နှလုံးကြွက်သားပုပ်ခြင်းတွင် နှလုံးသွေးကြောတွင်း ထိုးသွင်းခြင်း
စုစုပေါင်းပမာဏ ။ 140000 IU
20,000 IU သွင်းပြီး 2000IU/min ဆက်ပေးပါ။ 60 မိနစ် ကြာ ဆက်ပေးပါ။
အဆုတ်တွင် သွေးခဲပိတ်ခြင်း၊ သွေးကြောပိတ်ခြင်းတွင် သွေးကြောတွင်း ထိုးသွင်းခြင်း
စတင်သော ပမာဏ ။ ၂၅၀၀၀၀ ယူနစ်/ ၃၀ မိနစ်
ထိန်းသော ပမာဏ ။ ၁၀၀၀၀၀ ယူနစ်/ နာရီ။ ၂၄-၇၂ နာရီ ကြာ ပေးပါ။
သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်းတွင် သွေးကြောတွင်း ထိုးသွင်းခြင်း
စတင်သော ပမာဏ ။ ၂၅၀၀၀၀ IU/၃၀ မိနစ်
ထိန်းသော ပမာဏ ။ ၁၀၀၀၀၀ IU/ နာရီ။ ၇၂ နာရီကြာ ပေးပါ။
သွေးလွှတ်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်းတွင် သွေးကြောတွင်း ထိုးသွင်းခြင်း
စတင်သော ပမာဏ ။ ၂၅၀၀၀၀ IU/ ၃၀မိနစ်
ထိန်းသော ပမာဏ ။ ၁၀၀၀၀၀ IU/ နာရီ။ ၂၄-၇၂ နာရီကြာ ပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Streptase (စထရက်တေ့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Streptase (စထရက်တေ့စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Streptase® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Streptase® အခြောက်ခံ အဖြူရောင်အမှုန့် ၅၀ မီလီလီတာ ထိုးဆေးပုလင်း ( ၁၅၀၀၀၀၀ IU)
Streptase® အခြောက်ခံ အဖြူရောင်အမှုန့် ၆.၅ မီလီလီတာ ပုလင်း ( label green : 250,000 IU ; label blue : 750,000 IU ; label red : 1,500,000)
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးအလွန်အကျွံ သောက်မိပါက ဒေသတွင်း အရေးပေါ်ဌာနကို ခေါ်ပါ။ သို့ မဟုတ် အနီဆုံး အရေးပေါ်အခန်းကို သွားပါ။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင်သောက်နေသော ဆေးများ အားလုံး ( သောက်ရန် ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများ နှင့် အလွယ်တကူဝယ်ရသော ဆေးများ) ၏ စာရင်းကို ယူလာရန်အရေးကြီးသည်။
Streptase® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Streptase. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/streptokinase-intravenous-route-intracoronary-route/side-effects/drg-20070834.Accessed October 5, 2016.
Streptase.http://www.rxlist.com/Streptase® (Streptokinase) -drug/side-effects-interactions.htm. Accessed October 5, 2016.
Streptase.http://www.mims.com/philippines/drug/info/streptokinase?mtype=generic. Accessed October 5, 2016.